Lalao Olimpika any Korea Atsimo : Malagasy tokana mandray anjara i Mialitiana Clerc -
AccueilVaovao SamihafaLalao Olimpika any Korea Atsimo : Malagasy tokana mandray anjara i Mialitiana Clerc
10/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Na tsy manana ranomandry aza. Mihofahofa miaraka amin’ireo sainam-pirenena 93 mandray anjara amin’ny Lalao Olimpika atao any Pyongyang any Korea atsimo ny sainam-pirenena malagasy. Malagasy tokana mandray anjara amin’io lalao iraisam-pirenena io, ary nitondra ny sainam-pirenena malagasy i Mialitiana Clerc, ary amin’ny fikorisana amin’ny ranomandry no taranja handraisany anjara. Izy araka izany no malagasy faharoa mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny andro ririnina toa izao, taorian’i Matthieu Razanakolona tamin’ny taona 2006 tany Tutin- Italia, ary vehivavy malagasy voalohany mandray anjara amin’izany fihaonamben’ny fanatanjahantena izany. Tontosa omaly ny lanonam-panokafana izany lalao izany.
Tovovavy vao 16 taona i Mialitiana Clerc, ary hita fa hanana ny ho aviny eo amin’io taranja io. Ny 16 novambra 2001 izy no teraka teny Ambohitrimanjaka. Teo amin’ny faha-herintaonany izy no natsangan’ny fianakaviana Frantsay iray , ary notezain’izy ireo tany. Tany no nianarany io taranja io, ary hita fa voafehiny tanteraka, ka nahafenony ny fepetra rehetra nahafahany mandray anjara amin’io lalao io. Dingana maro no tsy maintsy lalovana vao afaka miatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena toa izao. Manara-maso, ary manantena vokatra avy amin’ity atleta ity ny malagasy rehetra, na betsaka aza no tsy mahalala ny antsipirihin’io taranja handraisany anjara io.